अखबारहरूले सोच्न आवश्यक छ ... | Martech Zone
मंगलवार, सेप्टेम्बर 5, 2006 मंगलवार, सेप्टेम्बर 5, 2006 Douglas Karr
सेठबाट ब्लग आज एक बारे लेख सम्पादक र प्रकाशकबाट गोडिनको विचारहरूको बारेमा सानो नयाँ ठूलो छ र ती कसरी अखबार उद्योगमा लागू हुन्छन्।
धेरै कम्पनीहरू जो आफूलाई प्रगति गर्न खोजिरहेका छन् उनीहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धाको तुलनामा SWOT विश्लेषण गर्ने छन्। समस्या यो हो कि 'स्थानीय' मिडियाले लामो समयको लागि इन्टरनेटलाई खतराको रूपमा बेवास्ता गर्ने ठूलो काम गर्‍यो। यो अखबारहरूले क्रेगको सूची र eBay लाई वर्गीकृत राजस्व हस्तान्तरण नगरेसम्म थिएन कि उनीहरूले पत्ता लगाए कि यो अन्तर्वेब कुरा यहाँ छ। तर उनीहरूसँग अझै आफ्ना क्षेत्रीय मांसपेशीहरू फ्लेक्स गर्न छन् र तिनीहरू कहाँ छन् भनेर लाभ लिन।
SWOT = (S) वजन, (W) eakishes, (O) pportunities, (T) hreats
एक अखबारको ईन्टरनेट प्रतिस्पर्धामा तीन मुख्य कारकहरू छन्: स्थानीय कभरेज, स्थानीय वितरण र स्थानीय संसाधनहरू। के तपाई त्यहाँ केही सामान्य देख्नुहुन्छ? स्थानीय, स्थानीय, स्थानीय !!! यी factors कारकहरू हुन् जुन प्रतिस्पर्धी फाइदाहरूमा रातोरात परिवर्तन गर्नुपर्दछ! मैले एक दशक भन्दा बढी समय सम्म अखबारमा बिताएको थिएँ र मेरो फोक्सोको शीर्षबाट चिच्याइरहेको छ कि हामीले स्थानीय हुने अवसरहरूको फाइदा लिन हामीले हाम्रो शक्तिको फाइदा लिनुपर्दछ। यो बहिरा कानमा थियो।
मुख्य मुद्दा यो हो कि अखबारको उद्योग एक अनैतिक उद्योग हो। यसका नेताहरू उद्योगभित्रै शिक्षित हुन्छन् र यसले कम प्रतिभाको लागि उद्योग छोड्दछ। अर्कोतर्फ, इन्टरनेट उद्योगले धेरै उद्योगहरूबाट प्रतिभा स .्कलन गरेको छ - समाचार पत्रहरू (मोइ) सहित।
म निश्चित छुईन कि चाबी भनेको त्यो हो कि अखबारहरूले सानो सोच्न आवश्यक छ, म साँच्चिकै विश्वास गर्दछु कि उनीहरूले क्षेत्रीय व्यवसायको रूपमा उनीहरूको भिन्नताहरूको फाइदा उठाउन आवश्यक छ। साथै, मलाई लाग्छ यो उच्च समय हो कि उनीहरूले आफ्नो चारवटा भित्ता बाहिर प्रतिभा बनाउन को लागी शुरू गर्न। मान्छेहरु लाई जीवन भर को लागी गरीएको छैन उनीहरुलाई राम्रो गरीरहेका छैनन्।
तपाईंको वेब २.० लोगो बनाउनुहोस्
मई 1, 2009 मा 4: 31 PM
त्यो साँच्चै राम्रो बिन्दु हो - परिवर्तन सधैं चुनौतीपूर्ण छ!